Archive du 20171026
Fanadiovana an’Antananarivo Tonga ny fitaovana raitra
Tonga ny fiarabe ACTROS voalohany, entina hanampiana ny CUA hanadiovana ny tanànan’Antananarivo.
Antenimieram-pirenena Tsy mbola eny Tsimbazaza ny lalàna hifehy ny tetibola 2018
Lany omaly, nandritra ny fivoriana itambarambe, teo anivon’ny Lapan’i Tsimbazaza, ny volavolam-pandaharam-potoana iasan’ny Antenimieram-pirenena manomboka ny 25 oktobra 2017 ka hatramin’ny 27 novambra 2017.
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Nampiaka-peo ny ankamaroan’ireo depiote
Nisy fanamarihana manokana mikasika ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny nifanaovan’ireo depiote tonga nivory teny Tsimbazaza omaly
Nisahotaka ny vahoakan’Ambohimanarina Soloina olon’ny HVM ny sefom-pokontany
Mitohy hatrany ny kajy maloton’ny fanjakana HVM mba hanamorana ny fitazonam-pahefana.
Arivonimamo renivohitra Hahazo fotodrafitrasa sahaza azy
Lalana mirefy 3,7km eo an-tampon-tanànan'Arivonimamo no nasiam-panarenana, toy izany koa ny kianja lehibe fanaovana fanatanjahantena ao an-toerana.
Tononkalo ho an’I Jean
Be marenina Be marenina loatra ’ty Jean kely ‘ty Tenenina foana tsy mety mihaino Ho avy tsy ela ny “mandrovi-tsihy” “Ilay takotra ho vaky” ihany koa efa saino.
Lalatiana Rakotondrazafy mivady Nisy nitory indray
Nametraka fitoriana tamin’ny anaran’ny tenany manokana niampangana ny mpitantana haino aman-jery Free FM, Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny,
Fianakavian’ny profesora Zafy Albert Nankasitraka ny CUA
Tonga naneho fisaorana manokana ny fiadidiana ny kaominina Antananarivo Renivohitra tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely omaly ny solontenan’ny fianakavian’ny filoha teo aloha, Zafy Albert,
Clémence Raharinirina -FTAR Mpikaramanadin’ny fanjakana
Nahazo alalana tamin’ny prefektioran’ny polisy eto Antananarivo ny filaharambe katsahin’ny Biraon’ny FTAR (Fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra), tarihin’i Clémence Raharinirina, hatao rahampitso zoma 27 oktobra, raha ny vaovao azo.
Fiahiana ara-tsosialy Tonga tany Mandritsara ny CNaPS
Tompon’andraikitra maro ahitana olom-boafidy sy olom-boatendry, ny mpampiasa ary ny mpiasa miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana any amin’ny distrikan’i Mandritsara no miatrika ny fiofanana karakarain’ny CNaPS nandritra ny telo andro.
Taxi mila Omavet “ Mila mivoatra sy mandroso isika”
Noraisin’ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo, Marc Ravalomanana, tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely omaly ireo mpitatitra am-piarakaretsaka izay resy lahatra fa ilaina ny fanavaozana sy fanatsarana ny fitsirihana ireo fiara mifamezivezy eto Antananarivo amin’ny alalan’ny Omavet.
Kaomisiona Maharitry ny CAF Ahitana olona 5 avy aty Madagasikara ao anatiny
Nivoaka ankehitriny ny anaran’ireo kaomisiona maharitry ny CAF mandritra ny taom-piasana 2017-2019. Ahitana mpikambana 20 ao anatiny dia Atoa Ahamad (Madagasikara) no filohany. Ghaneana sy Congoley ary Marokanina no filoha lefitra 3 ary Egypsiana no Sekretera Jeneraly “par interim”.
Edito Mahonena !
Na ny mpitondra na ny vahoaka na ny mpandraharaha na ny mpitondra fivavahana na ny mpanao politika …
Fanafody pesta, TDR mampiahiahy… Manazava ny Dr Ratsirarson Josea
Na dia mbola mahazo vahana aza ny aretina pesta eto amintsika dia tsy tokony hihinana fanafody ireo olona tsy marary mba hahazoana vokatra mahomby hatrany amin’ny fitsaboana ny marary.
Fiatrehana ny pesta Mila fanovana toe-tsaina sy fomba fiasa
Miteraka ahiahy sy tahotra any anaty fiarahamonina amin’izao fotoana ny valanaretina pesta, izay marihana fa azo tsaboina rehefa fantatra ara-potoana sy voakarakara eny amin’ny tobim-pitsaboana.
Antananarivo Renivohitra Ho afaka ao anatin’ny iray volana ny fako rehetra
Ho afaka ao anatin’ny iray volana ny fako rehetra manerana ireo Boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra.
Raharaha orinasa AAA Tsy miditra amin’io intsony aho, hoy Ravalomanana
Efa nampanofaina amin’ny AAA io fa tsy an’ny Tiko intsony ka tsy mahazo misokatra, hoy i Marc Ravalomanana. An’ny AAA io, dia izay ataony any fa tsy miditra aho, fa avelao izy no hanao azy.
Sekoly Katolika Mbola nisy ny nanakatom-baravarana
Na dia nanao fanambarana goavana aza ny DIDEC ny faran’ny herinandro teo fa hiverina hianatra avokoa nanomboka omaly alarobia 25 oktobra ny sekoly katolika rehetra dia nisy tamin’izy ireo tokoa no nianatra.
Teratany vahiny nisy naka an-keriny Efa hita i Nahid Meralli Ballou
Efa tafaverina eo anivon’ny ankohonany amin’izao fotoana ilay teratany Indiana Nahid Meralli Ballou, taorian’ny 17 andro andro nakan’olon-tsy fantatra an-keriny azy.